Eyona nkqubo ilungileyo yokuguqula iJPG iye kwi-ICO kunye neewebhusayithi ezifanayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ezona webhusayithi zibalaseleyo (okanye iiapps) zokuguqula umfanekiso weJPG uye kwi-ICO
UManuel Ramirez | | Izixhobo zoYilo, Iimpawu
Ezi nkqubo ze ukuguqula umfanekiso weJPG ube yi-ICO kuya kwenza ubomi bethu bube lula ukuya kule fomati yomfanekiso ingaziwa njengeyokuqala, kodwa esetyenziswa kwimeko ze-IT apho kufanelekileyo ukwenza umfanekiso omnye okanye nangaphezulu ngobukhulu obahlukeneyo kunye nobunzulu bombala; Ngamanye amagama, abo baphuhlisi besoftware bafuna enye ifomathi yomfanekiso ezinikele ngakumbi kuhlobo lwemveliso.
Phakathi kweenkqubo ezikhoyo ezinokukwazi ukuguqula umfanekiso weJPEG ukuya kwifomathi ye-ICO sifumana inani elifanelekileyo leapps zewebhu ukuba baya kusisebenzela ngokugqibeleleyo ngenjongo enye. Eyona nto intle kukuba siza kugcina ufakelo lwenkqubo (nangona sine-app efanelekileyo yokufaka ongakwaziyo ukuyiphosa) kwaye kufuneka siye kwikhonkco elifanelekileyo kwidilesi ye-intanethi kwezinye zewebhusayithi. Siza kufundisa.
1 Guqula umfanekiso wakho ube yifomathi ye-ICO
4 Guqula Simahla kwi-Intanethi
7 Inkqubo yeWindows: I-PNG yasimahla kwi-ICO Converter
Guqula umfanekiso wakho ube yifomathi ye-ICO
Le ndawo ikwi-Intanethi yenye apho sinakho khona fumana uninzi lweentlobo zokuguqulwa kwazo zonke iintlobo zeefomathi ehambelana nemifanekiso. Ngapha koko, igama layo licacile kangangokuba asothusi ukuba singaziguqula ezo fomathi zinje ngePNG, JPG kunye neICO, yile nto siyifunayo.
Ngokungafaniyo nezinye iindlela esiza kukwazisa ngazo, le isimahla, ke awuzukuhamba ebhokisini ukuze ukwazi ukufikelela kuguquko lomfanekiso kwifomathi yeJPEG iye kwi-ICO. Enye yezinto eziphambili kule webhusayithi kukuba ujongano lulula, enceda kwinkqubo yokuguqula ukuze singabhideki kwaphela.
Inye kuphela ewe, kufuneka ubhalise ukuze sikwazi ukufikelela kubuhle kunye nezibonelelo, ngaphezulu ngokwaneleyo ukuba singenza idatha yethu njengesizathu. Ngokwayo iyiwebhusayithi elungileyo yokuguqula imifanekiso emincinci ngaphandle kweemfuno ezininzi. Ewe inentengiso eqhelekileyo, ke jonga kakuhle kwifoto kwaye uye kuloo festile apho sinokulahla khona iifayile okanye ucofe nje kwiqhosha ukulayisha umfanekiso esifuna ukuwuguqula ukusuka kwiJPEG ukuya kwi-ICO.
Guqula umfanekiso wakho - WEB
Ukusuka kule webhusayithi sinokuthi yi Esona siguquli somfanekiso sikwi-JPG kwi-Intanethi kwifomathi ye-ICO kuluhlu. Isiphene kuphela, kwaye nangakumbi xa sifuna ukungahlawuli nepeni ye-euro, kukuba iphantsi kobhaliso lwenyanga ukuze ukwazi ukufikelela kubuhle kunye nezibonelelo.
Ewe uyakonwabela uthotho lweempawu ezingabalulekanga, kwaye abo bakhangela uhlobo olufanayo lwesisombululo abasifunayo kwimihla yabo baya kulonwabela, njenge Inani elifanelekileyo lezixhobo zokuhlela, ukucofa, ukuvulaUkudibanisa kunye nokufomatha amaxwebhu e-PDF.
Kwaye apha sinokulibala malunga nokusikelwa umda okunokubakho kwabanye, ukusukela asinawo umda wobungakanani layisha ifayile kwaye singenza lonke utshintsho esilufunayo ngaphandle kweengxaki. Lilonke, ibonelela ngaphezulu kwe-50 yezixhobo ezahlukeneyo, inkxaso yazo zonke iifomati zemifanekiso, uguqulelo olukhoyo lwe-desktop kunye nokubethela phantsi kwe-SLL yokhuseleko oluphezulu.
Omnye Isisombululo sentlawulo esithi ukuba siyithelekisa nokhuphiswano lwayo Njengoko ziinkqubo zokuguqula imifanekiso yeJPG iye kwi-ICO, ixabiso eliphantsi kakhulu, ke musa ukuziva ubanjiwe ziindleko zalo ukuba siyayithelekisa neenketho zayo zasimahla. Apha siya kuba simahla ukuba sisebenzise izixhobo zakho ukulungiselela thina. Kubiza i-6 yeedola ngenyanga, ke yiya kuyo.
I-HiPDF - web
Esi sisombululo sewebhu sahlukile kuba ayiceli ukuba sibhaliswe ukubanakho ukusebenzisa umsebenzi wayo wokuguqula imifanekiso yeJPEG kwifomathi ye-ICO. Ke umahluko kolunye lwezikhetho zangaphambili esinalo kolu hlobo loguqulo. Ngamanye amagama, singakulibala ukubhalisa ukuguqula imifanekiso.
Phakathi kokulunga kwayo Kukwakho nethuba lokukwazi ukuguqula i-intanethi Zonke iintlobo zefomathi yomfanekiso ngaphandle kwe-ICO njengethagethi enikezwe kwesi sithuba. Ayiphuncuki kumava amaninzi anikezwe zizinye iiwebhusayithi ezikwi-intanethi kuluhlu esilunikayo, kuba basebenzisa eli candelo ukuze udlulise ifomathi yePNG okanye iJPG.
Kwaye ngelixa isimahla, ayivumeli ukuqhutshwa kwemifanekiso IJPG iye kwi-ICO, ke kule meko sifumana ukukhubazeka okuncinci nangona kuqondakala ngokungahlawuli nepeni ye-euro kwisisombululo sayo. Singasebenzisa iwebhu ukwenza isenzo sokuguqula ifayile njengoko inenguqulelo yokuba ikwazi ukuqhubeka nokuguqulwa kwebhetshi yemifanekiso yeJPG kwi-ICO.
Omnye Isisombululo esinomdla esingasibuzi i-imeyile ukutshintsha umfanekiso, ke kuya kufuneka uwuthathele ingqalelo ngaphambi kokuhlawula enye into ephantse ilinganise amathuba ayo. Sikwacacisa ujongano lwayo olulula nolusisiseko olungagubungeli amava kwaphela kodwa lwenze kube lula ukufeza iimfuno zethu.
Khupelo - web
Guqula Simahla kwi-Intanethi
Enye iwebhusayithi ekwi-intanethi enokubangela ukudideka ngokuthi le "yasimahla" inxulunyaniswa nokuba nentengiso eninzi, kuba sijongane nesisombululo seprimiyamu phantsi kokuphuma kwangaphambili. Ewe kuyinyani ukuba sijamelene nenye yezona ndlela zibalaseleyo zokuhlawula esinazo kwi-Intanethi, nangona izicwangciso abazibonisayo zixhomekeke kumda wokulayisha kunye neefomathi ezikhoyo zokwenza uguquko olufunwayo.
Gcina ukhumbula ukuba ilandela into ebekiweyo eseleyo, kwaye oko kukuthi siya kuba nakho ukwenza ezinye iintlobo zotshintsho ezinxulumene ividiyo, uxwebhu kunye nefomathi zemifanekiso. Oko kukuthi, ngaphandle kokusebenzisa iJPG okanye i-ICO siya kuba nakho ukwenza uguquko kwi-PNG, nangaphezulu.
Mhlawumbi oko ube ngomnye wemikhosi yaseSwitzerland yenguqulelo ekwi-Intanethi yenza enye ukuba ithathele ingqalelo ukwenza olo tshintsho. Ubuncinci xa sihlawula siyalibala malunga nentengiso yokuba nesixhobo esizinikeleyo sokuguqula imifanekiso yeJPG kwii-ICO. Ikwabandakanya ukuguqulwa kwebhetshi ukuba sijonga olu khetho. Amaxabiso anokuvela kwi-6 yeedola ukuya kwi-11 ngenyanga ngokuxhomekeke kwisicwangciso esithengayo.
Guqula Simahla kwi-Intanethi - web
Siyaqhubeka ngokufanayo kwiwebhusayithi eya kusivumela ukuba singene Uluhlu oluhle lokuguqulwa kuzo zonke iintlobo zeefomathi (kunye besele sithetha ngaye kwiminyaka embalwa edlulileyo) yeefayile zemifanekiso kunye nezo zingenjengeevidiyo. Kwaye ngelixa ezinye zezixhobo zayo zisimahla, ngokuchanekileyo leyo eguqula imifanekiso yeJPG iye kwii-ICO ayisiyiyo.
Sinayo Iinketho zeselfowuni kunye nedesktop ezikhoyo, ihlaziywa rhoqo kwaye inikezela ngokufihlakeleyo ukulayisha ukusigcina silumkile kwaye sikhuselekile. Lukhetho lweprimiyamu oluya kuthathelwa ingqalelo kuba inonxibelelwano olwenziweyo kwaye inokuba yenye indlela kwabanye.
Kwaye endaweni yokunikezela ngomrhumo wenyanga, apha senza intlawulo enye yeedola ezi-7 ukonwabela i-JPG yakho ekwi-intanethi ukuya kumava okuguqula ifomathi ye-ICO.
Inguqulelo - web
Kwaye nje Sigqiba uthotho lwewebhu kwi-intanethi yokuguqula kunye nabanamandla kakhulu, okanye leyo inikezela ngeentlobo ezahlukeneyo zenguqu, kuba isisa kwiindidi ezili-1.200 kwaye sinakho ukubhaliswa phantsi kwezicwangciso ezintathu: ezisisiseko, iPro kunye neShishini.
Ke ngoku sithetha ngesona siguquli sikhulu kwi-intanethi kwiwebhu esinokuthi siye kuyo ukuba kumhla wethu sijongana noluhlu lweefomathi zemifanekiso ezahlukileyo. Kwaye uZamzar uthwala iyasebenza ukusukela ngo-2006Oko kukuthi, ngaphezulu kweminyaka eli-13 kwi-Intanethi ukubonelela ngazo zonke iintlobo zotshintsho lwefomathi, kubandakanya i-CAD. Ewe, inika ukuguqulwa kwemifanekiso yeJPG kwi-ICO ngaphandle kokulibazisa.
Phakathi kokulunga kwayo sinokuthembela kumda we layisha ukuya kuthi ga kwi-2GB, Inkxaso yeefomathi ezingaphezu kwe-1.100, ngaphezulu kwe-1.200 iindidi zokuguqulwa, ezifumaneka kuzo zonke iintlobo zebrawuza kunye nezixhobo, kwaye zisivumela ukuba siguqulwe ngokungenamda ngosuku.
Ewe kunjalo, ine-cons yayo, kuba imifanekiso kufuneka ikhutshelwe nganye nganye kunye nokusebenza kwayo kwemifanekiso emincinci kuncinci kakhulu kumsebenzi ngamnye. Nge- $ 9 sinesicwangciso sakho esisiseko, se- $ 16 isicwangciso sakho sePro kunye neShishini ukuya kuthi ga kwi-35 ngenyanga.
UZamzar - web
Inkqubo yeWindows: I-PNG yasimahla kwi-ICO Converter
Kwaye nangona singenayo ifomathi yeJPG egameni lale nkqubo yeWindows, ayibonisi ithuba lokuyisebenzisa ukuyigqithisela kwi-ICO. Yinkqubo yeWindows enokudala kunxibelelwano, kodwa iyasisebenzisela umsebenzi owufunayo.
Phakathi kwenye yezona zinto zibalaseleyo kukukwazi ukubonisa yeyiphi inkqubo esifuna i-icon ye-ICO, nokuba yi-Android, i-iOS, iWindows, iLinux okanye iMac OS X. Ikwabonelela ngokufumaneka kwe yongeza imifanekiso emininzi kunye nokusebenzisa i-batch converter.
Ukuthetha ngokubanzi yi Isiguquli esikhulu ukusuka kwimifanekiso yePNG ukuya kwi-ICO, kwaye uhlala unethuba lokusebenzisa iJPG, GIF, BMP kunye nezinye. Ekuphela kwento enokuphoswa kukuba unokwenza isisombululo se icon.
Ukukhuphela - web
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Ezona webhusayithi zibalaseleyo (okanye iiapps) zokuguqula umfanekiso weJPG uye kwi-ICO
Iibhulabhu zentetho ezihlekisayo